Duqa degmada Garowe C/asiis Nuur Cilmi (Koor) oo maantay ka waramay waxyaabihii kasoo baxay kalfadhigii u soo xirmaray golaha deegaanka degmada Garowe. – Radio Daljir
Seteembar 18, 2012 5:14 b 0
Garowe, Sept, 18 – Duqa degmada Garowe mudane C/asiis Nuur Cilmi Koor ayaa shir-saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa degmada waxaa uu uga hadlay arrimihii u qabsoomay golaha deegaanka degmada Garowe.
Md, C/asiis Nuur CIlmi ‘Koor’? waxaa uu ka sheekeeyay arrimo u badnaa hormarinta degmada Garowe, sida fayo-dhawrka nadaafada, bilicda caasumada, samaynta laamiyo laga hirgaliyo Garowe, ammaanka caasumada, iyo arrimaha canshuuraha birriga.
Mar aan wax ka waydiinay duqa labixitaanka albaabada guryaha oo dawladda hoose ay ku kacdo ayuu kaga jawaabay “Arrintaasi way jirtaa, waxbadan ayaana nalasoo-waydiiyay, balse waxaan qirayaa annaga arrintaasi inay faa’iido badan noogu jirto, dadkunay ay tahay sida kaliya ee ay lacagaha canshuuraha ah ee ku waajibay u bixin-karaan, intii aan arrintaasi go’aan kale ka gaaraynana, waan siiwadi-doonaa qorshahaasi”.
Hishiis ku saabsan ammaanka dalka Soomaaliya oo dhexmaray dawladda cusub iyo Puntlnad, iyo AMISOM oo imaanaysa Puntland.